My Roommate IsaGumiho – Gold Channel Movies
May. 26, 2021 tvN
Episode 1 May. 26, 2021
Episode6Jun. 10, 2021
Episode7Jun. 16, 2021
Episode 8 Jun. 17, 2021
Episode9Jun. 23, 2021
Episode 10 Jun. 24, 2021
Episode 11 Jun. 30, 2021
Episode 13 Jul. 07, 2021
Episode 14 Jul. 08, 2021
Episode 15 Jul. 14, 2021
Episode 16 Jul. 15, 2021
“My Roommate isaGumiho” “간떨어지는 동거”
စိတ်ကူးယဉ်အချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းမျိုးကိုမှ နှစ်ခြိုက်သဘောကျတတ်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Webcomic ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ “My Roommate isaGumiho” “간떨어지는 동거” ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း၉၉၉နှစ် သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့မြေခွေးအဖြစ် Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong)က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သူဟာ လူ့လောကမှာတော့ထက်မြက်ပြီးရုပ်ချောတဲ့ ပါမောက္ခတစ်ယောက်ပေါ့။ မြေခွေးကနေ လူဖြစ်ဖို့အတွက် လူသားစွမ်းအင်တွေကိုသူ့ရဲ့မြေခွေးအမြူတေထဲမှာ စုဆောင်းနေပြီး လူဖြစ်လာဖို့ အချိန်သိပ်မလိုတော့ပါဘူး။
Lee Dam ဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူနေရာမှာတော့ (Hyeri)ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး သူမဟာ တစ်နေ့မှာ အရက်မူးနေတဲ့သူ့သူငယ်ချင်းက Shin Woo Yeoရဲ့ကားပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့အတွက် သူ့သူငယ်ချင်းကိုအဲ့ကားပေါ်ကနေ ဖယ်ရင်းက Shin Woo Yeoနဲ့ သူမကြားက ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်မယ့် မတော်တဆမှုသေးသေးလေးနဲ့ကြုံလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ မြေခွေးအမြူတွေက Lee Damရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားတာပါပဲ။ အမြူတေက လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ တစ်နှစ်လောက်ပဲရှိနေနိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပျက်စီးသွားတဲ့အခါ အမြူတေကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့လူက သေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Lee Damကို သေစေနိုင်သလို Shin Woo Yeoလည်း လူမဖြစ်လာနိုင်တော့ပါဘူး။
အဲ့ဒါတွေ့ကြောင့် သူတို့၂ယောက်တစ်အိမ်ထဲအတူတူနေဖို့အကြောင်းဖန်လာပြီးဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုအဖြေရှာကြမလဲဆိုတာကို အချစ်ဟာသဇာတ်ကွက်လေးတွေနဲ့ရှုစားကြရမှာပါ။ အပိုင်း၁၆ပိုင်းပါဝင်ပြီး tvNရုပ်သံလိုင်းက အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ကြာသပတေးနေ့တွေမှာ ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်လို့ GC Teamနဲ့အတူ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှု့ပေးကြပါဦးနော်။
Translated by Hnin Aye Nyein,Youn Kyi Phyu,Thae and Snowflake
Original title 간 떨어지는 동거
Hein khantJuly 7, 2021Reply
TweetyJune 19, 2021Reply
The fiery priest kdrama လေးတင်ပေးပါလား
Nann Shwe Ya Min AyeJune 16, 2021Reply
ဘာလို့ down လို့ မရ​တော့တာလဲဟင် …
Account ရှိမှ ရ​တော့မှာလား 😭
Winnie Ngoon ပြန်ပေးရင် ပိုကြိုက်တယ်
TlayMay 27, 2021Reply
ဟုတ်တယ် သူက အရမ်းတိကျတာ
nunu ThweJune 9, 2021Reply
မျှော်နေတယ် မင်မင် 😋